COVID-19: Ny tsara ho fantatry ny vehivavy bevohoka | Journal Madagascar
Maro ireo fanontaniana mipetraka ao an-tsain’ny vehivavy bevohoka manoloana ny fiparitahan’ny valan’aretina Covid-19. Misy fiantraikany amin’ny zaza ao am-bohoka ve raha voan’ny coronavirus ny reniny? Miteraka fahafahan-jaza ve raha toa ka mararin’ny coronavirus ny vehivavy mitondra vohoka? Inona no tokony atao hisorohana ity aretina ity? Inona no tokony atao raha sanatria ka voa? Namaly ireo fanontaniana ireo ny dokotera Fidy BARINIAINA avy ao amin’ny Clinique Fidy Ambatomainty. Nambaran’i Dr Fidy fa ao anatin’ireo sokajin’olona marefo ny vehivavy behovoka ka mila mitandrina ho fiarovana ny ainy sy ny zaza ao an-kibony.
Fanontaniana: Inona avy ny fepetra tokony atao hisorohana ny Coronavirus?
Dr Fidy: Fomba fisorohana voalohany tokony atao ny fanarahana ny fepetra ara-pahasalamana toy ny fanaovana arovavaorona, fanajana ny elanelana iray metatra, fanasana tanana amin’ny rano sy ny savony na gel hydroalcoolique. Mifindra amin’ny alalan’ny piti-drora ny coronavirus ka izay no antony hanaovana arovavaorona, indrindra rehefa toerana be olona mifanerasera. Sorohana ihany koa ny fikitihana na fisokirana orona satria raha misy piti-drora ny tanana nefa mbola tsy voadio dia miditra any anaty orona ilay tsimokaretina.
F: Tokony hanao vaksiny ve ny vehivavy manditra ny fitondrana vohoka?
Dr: Tsara tamin’izy mbola tsy bevohoka no nanao vaksiny
F: Fa maninona no tokony mihinana sakafo ara-pahasalamana ny vehivavy bevohoka?
Dr: Tokony mihinana sakafo ara-pahasalamana toy ny protéine izay hita amin’ny hena, atody, trondro soja; sakafo mitondra hafanana sy manome hery (glucide) toy ny vary hanikotrana, paty, mofo vita amin’ny lafarinina ary ny sokajy fahatelo dia ireo sakafo mitondra vitamina sy otrikaina isan-karazany (oligoéléménts) toy voankazo sy legioma satria ny asan’ireo dia anti-oxydant izay miaro ny sela tsy ho simba vetivety , mandevon-kanina, miaro amin’ny homamadiana, mampiakatra ny hery fiarovana amin’ny ankapobeny. Tsiahivina fa tokony ho ampy torimaso ihany koa ny reny mitondra vohoka.
F: Rehefa inona no manatona tobim-pahasalamana avy hatrany ny reny bevohoka?
Dr: Tsara ny mampatsiahy fa amin’ny alalan’ny fitiliana ihany no ahafantarana fa mitondra ny coronavirus. Miseho amin’ny sery, kohaka, marary an-doha, marary tendra, mety reraka be, malain-komana, mivalana ity aretin ity, mitovy amin’ny gripa. Anisany ahafahantarana azy ihany koa rehefa tsy maheno fofona, tsy maheno tsiron-kanina, sempotra. Entanina hatrany hamonjy tobim-pahasalama rehefa misy soritra aretina. Raha oharina tamin’ity andiany voalohany ity covid-19 andiany fahatelo dia olon-dehibe sy ny an-drenivohitra no betsaka voa tamin’ny voalohany fa tamin’ity andiany fahatelo ity, voa daholo na olon-dehibe na ny ankizy na an-drenivohitra na ambanivohitra ary haingam-pifindra fa mora fehizina vao mahazo fanafody.
F: Miteraka fahafahan-jaza ve raha ve raha toa ka mararin’ny coronavirus ny vehivavy mitondra vohoka?
Dr: Ny Aretina amin’ny ankapobeny mihitsy izay mahazo ny reniny dia mahazo ny zaza, mety hiteraka fahafahan-jaza. Raha sanatria voan’ny coronavirus ny vehivavy bevohoka, ny reniny no tsaboina, mitovy amin’ny fitsaboana rehetra fa ny fanafody tsy zakan’ny bevohoka no tsy ampiasaina.